Mamorona sary misy effets Glitter: ny app sy tranokala tsara indrindra hanaovana azy | Famoronana an-tserasera
Manuel Ramirez | | Fitaovana famolavolana
El Ny effets glitter dia iray manolo-tena hanome izay rehetra mamirapiratra majestic izay ampifandraisintsika amin'ny antoko amin'ny Taom-baovao na koa ilay doka ho an'ny Codorniu cava izay ny feo volamena no tena mahasarika ny sain'ny olona.
Izy io dia teny ahafahantsika mahita valiny marobe sy izany amin'ny infografika dia mitarika antsika hanome azy io taratra sparkle io ary izay toa mamirapiratra eo imason'ny mpijery ny zava-drehetra. Hampianatra anao izahay hoe inona ny vokatra mamirapiratra, fampiharana sasantsasany hahafahana mampiasa azy amin'ny sary rehetra tadiavinao ary mini tutorial mba hahitanao izany vokatra izany amin'ny sary iray afaka minitra vitsy.
1 Inona no vokany mamiratra?
2 Ahoana ny fampiharana ny vokatra mamirapiratra amin'ny Photoshop
3 Fampiharana hametrahana glitter amin'ny sary
3.1 Glixel - effets Glitter sy Pixel
3.2 Kirakira + ho an'ny iOS sy Android, ilay fampiharana malaza
3.3 Mamiratra - Saripika Lahatsary Mahatalanjona
3.4 Selfie Sparkle Camera 2018
4 Tranonkala hanovana sary amin'ny glitter an-tserasera
4.3 Vokatry ny sary Stardust
Inona no vokany mamiratra?
Ny glitter amin'ny teny espaniola dia midika hoe mamirapiratra, mba hahafantaranao tsara hoe inona izany vokatra izany. ny zava-drehetra mifandray ilay mamirapiratra ka ny singa rehetra ampiharina ny vokatra mamiratra dia mamirapiratra toy ny kintana.
Ampiasaina be amin'ny sary izy io ho an'ny vokatra hatsaran-tarehy na ireo taovolo izay famirapiratana no zava-drehetra hisarika ny sain'ny mpanjifa sy ny mpampiasa ho avy amin-kery. Ao amin'ny Instagram dia afaka mahita azy amin'ny lahatsoratra maro isika ary, raha afaka mieritreritra isika fa mila olona matihanina izy ireo hampihatra ny vokatr'ilay famirapiratany, dia tsy hahagaga anao mihitsy ny zavatra azon'ny sivana apetraka tsara.
Tsotra fotsiny izany izany halo kintana kely izany izay mety halazo aorian'ny fandalovan'ny fiaran'ny Cinderella alohan'ny roa ambin'ny folo amin'ny alina. Na ny kirarony fitaratra aza dia misy vokany mamirapiratra izay manintona azy manintona ny mason'ny rehetra. Azonao atao tsara kokoa ny mahatakatra ny fomba azo ampiharina amin'ny sary ary amin'izany dia ataovy tsara kokoa ireo sary tianay zaraina amin'ny tambajotra sosialy.
Ahoana ny fampiharana ny vokatra mamirapiratra amin'ny Photoshop
Raha te hampihatra an'io vokatra io sy hahasarika azy dia handeha misintona firafitra aloha hampiasainay ho toy ny sary izay hofongaranay hampihatra azy amin'ny faritra manokana. Amin'ity tranga ity amin'ny maodely.
Mandeha any amin'ny Google izahay ary mitady "sary manjelanjelatra".
Ny sary rehetra dia afaka manampy antsika. Miankina amin'ny loko sy ny tonony tadiavintsika izany. Raha tiantsika hanana kalitao avo kokoa ny sary. Izahay dia mampiasa ny sivana haben'ny sary.
Afaka mandeha ao amin'ny Unsplash isika ary misintona ny sarin'ny maodely toa ilay eo amin'ny sary.
Ao amin'ny ohatra dia nisafidy ny ampahany hita maso amin'ny akanjo ba misy tsipìka isika.
Adikainay amin'ny sosona vaovao io ampahany io
Mametaka ilay firafitra amin'ilay ampahany nalaina tahaka izahay.
Misafidy ny sosona ny ampahany nopetahany modely izahay ary miaraka amin'ny tsindrona majika dia misafidy teboka iray ivelan'ny ampahany nalaina tahaka izahay hisafidianana ny faritra iray manontolo izay hofafanay manaraka.
Misafidy izahay ny sosona firafitra toy ny ary esory mivantana ka potehina rehefa nisafidy ny ampahany amin'ilay sary isika.
Nisafidy ny volon-koditra manjelanjelatra izahay ary nampidina izany hatramin'ny 43% hameno ary nifidy ny fomba fampifangaroana "linear Dodge".
Ankehitriny dia mankany amin'ny Sary> Fanitsiana> Fiolanana isika ary milalao teboka iray hanomezantsika ny vokany ho zava-misy marina kokoa. Toy ny sary ihany:
Ya miankina amin'ny famirapiratantsika no tadiavintsika ny vokatsika afaka manitatra kokoa ny vokany amin'ny Curves.
Raharaha ity misafidy haingo mety amin'ny sary izay tadiavinay mba hahitana ny feo tsara indrindra ary ny vokatra dia mahomby kokoa amin'ny fikasantsika. Fa andao, miaraka amina endrika, fanapahana vitsivitsy ary milalao amin'ny mangarahara miampy ny haavon'ny fiolahana, afaka mahazo valiny tena tsara isika.
Fampiharana hametrahana glitter amin'ny sary
Hampianatra anao andian-dahatsoratra izahay fampiharana ho an'ny Android sy iOS Izany dia hahafahantsika mitahiry ny asa ao amin'ny Photoshop ary noho ny sivana sy ny fikasihan-tanana etsy sy eroa, azontsika ampiharina ilay effets manjelanjelatra tadiavina efa ela.
Glixel - effets Glitter sy Pixel
Ity fampiharana ity dia hamela anao mampihatra izany vokatra tiana amin'ny alàlan'ny sary izay hampihatra ny glitter. Raha tsy tiantsika ny bika aman'endriny dia afaka mamafa sy mampihatra indray isika mandra-pahatongan'ny farany araka izay tiantsika. Anisan'ireo fiasa rehetra ananany isika dia afaka mahita ny vokatra hafaingan'ny fanaparitahana, ny endrika, ny vokany mandeha ho azy ary ny default, ka afaka segondra vitsy dia efa nampiharina izany vokany izany.
Una amin'ireo rindranasa alaina amin'ny Android indrindra Ary manana famerenana tsara kokoa izany, noho izany, apetratsika amin'ny anjarantsika kely izay hananantsika an'io sary io miaraka amin'ny famirapiratana vonona hizara.
Glixel - Mamiratra: Misintona ho an'ny Android
Kirakira + ho an'ny iOS sy Android, ilay fampiharana malaza
Izahay dia teo aloha ilay fampiharana izay nahatonga ny olo-malaza be hadalana. Selena Gomez, Paris Hilton na Rosie Huntington-Whiteley dia nampiasa azy io sy ny horonan-tsary sy sary nalainy, fantatrao ny fomba nanaovan'izy ireo izany, niaraka tamin'i Kirakira +.
Azonao jerena ao ity horonantsary ity amin'ny Instagram tsara ny fahitana an'ity vokatra ity raha ampiharina tsara:
Repost ny lahatsarinay izay nalaza be volana vitsivitsy lasa izay. Noho io fividianana fifaliana io dia nampiasa rindrambaiko mamirapiratra izahay? VOAFITRA GLITTER! OFF 50%, Tapitra rahampitso ?? raha tsy azonao atao ny mamaky ny fanazavana, aza manome hevitra momba ny fanamafisana. Voasakana ny tsy fitoviana. #london #glam #glowy #goldenglow #birmingham #makeupporn #makeupaddict #maquillage #makeup #highlighteronfleek #highlighteraddict #wakeupandmakeup #makeupmafia @universodamaquiagem_oficial #makeupswatches @maquillage #ma Makeup #highlighteronfleek #highlighteraddict #wakeupandmakeup #makeupmafia @universodamaquiagem_oficial #makeupswatches @maquiagem_oficial # makeupswatches #maquillagemakemmakeupnukemmakeup #instamakeup #picoftheday #beautyinsider #makeupartist #sarazaarcosmetics #makeupobsessed #instabeauty #girlquotes #highlighterjunkies #makeupporn
Lahatsoratra iray nozarain'ny Sarazaar Cosmetics®? (@sarazaarcosmetic) amin'ny Sep 23, 2017 ao amin'ny 4: 29am PDT
Amin'ny hafa, tsy ratsy ny fahitana azy:
Lahatsoratra iray nozarain'ny Hung vanngo (@hungvanngo) amin'ny Sep 12, 2017 ao amin'ny 12: 53pm PDT
Ity fampiharana ity ananantsika izany amin'ny iOS sy Android. Tsy maimaim-poana amin'ny iOS izy io, fa manana isa 4,8 isa eo ho eo miaraka amin'ny hevitra maherin'ny 7.400 nomena. Io dia ahafahantsika maka sary na horonan-tsary misy vokany mamiratra, manitsy ireo sary sy horonan-tsary ananantsika, mampiasa fihetsika hanovana ny vokany ary hanitsy ny jiro vokany aza.
Ny iray amin'ireo hatsarana tsara indrindra amin'ity rindrambaiko ity dia ny tsy fananany bokotra na safidy marobe, fa kosa mahay mandanjalanja ny interface azy ka noho ny bokotra vitsivitsy dia afaka mampihatra effets isika avy eo ary mampiasa ny fihetsika hanovana azy ireo. Io no tombony tsara indrindra raha ampitahaintsika amin'ilay voalaza teo aloha ho an'ny Android.
Kirakira +: Sintomy amin'ny iOS
Kirakira +: Sintomy amin'ny Android
Mamiratra - Saripika Lahatsary Mahatalanjona
Toy ny an'ny iOS teo aloha, noho ireo fihetsika azontsika atao mifamadika eo amin'ireo vokatra mamiratra samihafa natolotra ho an'ny mpampiasa iPhone. Mampiavaka azy ny fampidirana ireo kintana rehetra ireo sy ireo vokatra mahavariana mba hahatonga ny tarehy na ireo sary noely ireo mbola tsy nisy toy izany.
Manohana ny sary feno sary ary koa 1: 1 ho an'ireo sary ho an'ny Instagram. Izy io dia manana masontsivana hanampiana vokatra mamirapiratra lehibe kokoa ary manana andiana safidy hafa hanovana horonantsary toa ny mampangina azy, na manampy feo. Tsy very koa io safidy io mba hanaovana selfie ary afaka mametraka ireo vokany mahafinaritra isika.
Toy ny kirakira + ny zava-misy mahavita mampiasa fakantsary Mba handraisana horonantsary amin'ity vokany mamiratra ity dia vonjeo izahay ny fanovana ilay video aorian'izay. Raha tsy te handany fotoana ianao, dia mamporisika anao hampiasa ny fakantsarin'ny iPhone-nao ary hitahiry fotoana tsara.
Mamiratra - Saripika Lahatsary Sparkly: Sintomy amin'ny iOS
Selfie Sparkle Camera 2018
Rindrambaiko iray hafa toa ny roa teo aloha ary ananantsika amin'ny Android. Ny iray amin'ireo pitsopitsony dia ny fampidirana sticker hanova haingana ny taovolo. Izy io koa dia misy emoji sy tombokavatsa handravahana ireo sary ireo.
Ary tsy misy tsy fanitsiana horonan-tsary na sary hanampiana ireo vokatra mamirapiratra tadiavina. Raha tianao ny vokatra bokeh dia azonao apetraka izany (asehonay anao eto ny fomba fampiharana azy amin'ny Photoshop), ka amin'ny ankapobeny dia miatrika fampiharana mihoatra ny mahaliana izahay. Io dia ny fanandramana maromaro ary hijanonana amin'ilay manome antsika ny valiny tsara indrindra ho an'ny tadiavintsika.
Tranonkala hanovana sary amin'ny glitter an-tserasera
Miaraka izahay tranokala vitsivitsy hanovana ny sary izay tadiavinay amin'ity vokatra mamirapiratra ity izay hahafahanay misarika ny saina amin'ny tambajotra sosialy izay ampakarinay azy ireo. Ataovy.
Ity tranonkala an-tserasera ity dia iray amin'ireo tsara indrindra ary mametraka antsika mivantana aloha ho mpamoaka lahatsoratra rehetra miavaka amin'ny andiana fitaovana hita eo an-tampony. Tokony hotadidintsika fa amin'ny teny Anglisy izy io, fa raha mandeha amin'ny lahatsoratra Glitter na ny vokany isika dia afaka mahita ny sasany amin'ireo hatsarany lehibe indrindra.
Azonao atao ny mampiasa «Mameno glitter» ho fenoy faritra miaraka amin'ny effets glitter na raha tsy te-hanasarotra ny fiainantsika isika, ny iray amin'ireo asany tsara indrindra dia ny fampiasana ny lahatsoratra Glitter hanampiana lahatsoratra amin'ny sary rehetra. Azontsika atao ny misafidy karazana endritsoratra isan-karazany, effets manjelanjelatra samy hafa ary safidy andiany hafa hanamboarana an'io lahatsoratra io
Mba hamaranana dia tsindrio fotsiny ny «File», omenay anao amin'ny «Save as JPG» ary hananantsika ilay rakitra ao amin'ny solosaintsika. Fampiharana tranokala tsotra izay raha miasa azy isika dia afaka mahazo ilay vokany mamirapiratra tadiavina.
Glitterphoto.net: rohy mankany amin'ny tranonkala
iray hafa tranonkala mahaliana izay mitondra antsika any amin'ny sary tonga amin'ny toerana misy azy, fa afaka miakatra hisafidy ny antsika isika. Raha vantany vao vita io dia afaka misafidy ny vokatra mamirapiratra tadiavintsika sy ny hafainganan'izy ireo hampihatra azy isika. Ho hitantsika amin'ny efijery vaovao ny valiny izay ahitantsika ny tonian-dahatsoratra ahafahantsika manao fanovana ifotony toy ny gradients, mameno, manapaka, manampy lahatsoratra ary maro hafa.
ihany koa amin'ny teny anglisy, saingy tsy midika izany fa ampiasainay amin'ireo dingana telo ireo ary manana sary nakarina miaraka amin'ny effets glitter. Raha efa te hiditra lalindalina kokoa amin'ny rindrambaiko tranonkala isika dia afaka mampiasa ny sivana, vokany, zavakanto, sary miaina ary maro hafa. Tranonkala iray misy interface fototra tena izy, saingy afaka manome valiny tsara izany raha hataontsika izany.
Moon Pic: rohy mankany amin'ny tranonkala
Vokatry ny sary Stardust
Ary miafara amin'ilay eritreritsika ihany isika no tranokala an-tserasera tsara indrindra mampihatra effets glitter. Tsy noho ny vokany dia mamokatra haingana sy mandeha ho azy, fa noho ny interface madio sy maoderina kokoa noho ireo roa teo aloha. Izany dia nilaza fa tsy hahita karazana safidy sy fitaovana fototra marobe koa ianao, fa satria ny tena tadiavintsika dia ny mampihatra ireo karazana vokatra ireo, maninona no tadiavinao bebe kokoa?
Mampakatra sary izahay ary hisy vokany "stardust" hapetraka hamela sary toa ilay hitanao tamin'ny ohatra teo aloha. Ny marina dia manao tsara izany. Raha tadiavintsika dia azontsika atao ny manova ny hamafin'ny "stardust" effet, izay mitovy indrindra amin'ny effets glitter.
Glitterfy, dia a fitaovana an-tserasera izay mamela anao hamorona sary miaraka vokany mamiratra, amin'ny alàlan'ny fampakaranao fotsiny ny sary tadiavinao dia afaka mahita ny vokany ianao afaka segondra vitsy.
Safidy maromaro maromaro ahazoana an'io vokatra mamirapiratra io Ary hiankina amin'ny fahaizantsika amin'ny Photoshop, amin'ny fampiharana hapetratsika amin'ny telefaona iPhone na Android na tranokala an-tserasera ahafahantsika manao fanovana hamela sary misy valiny lehibe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Mamorona sary miaraka amin'ny effets Glitter
Tiko ny fandoavam-bola fa raha manampy ahy amin'ny filazanao amiko aho amin'ireto rohy roa ireto dia tokony hikopy aho handoko ny sary
Valiny amin'i PAOLA
tanjona dia hoy izy:
Misaotra betsaka amin'ny pejy, azafady, mila fanampiana aho, tsy haiko ny mametaka ny sary, ny pejiko dia tsy manana safidy sonic. Misy rohy roa koa, lazao amiko ny fomba hanaovana azy ary raha afaka mametaka ireo litera ao amin'ny msn koa ianao? Manantena aho fa valio misaotra !!!!
Mamaly an'i cely
CASIMIRO GARDEA OROZCO dia hoy izy:
Tena tiako io habaka io fa tena tena tsara ary ny fitaovana hamoronana ny vokany dia tena tsotra sy mora ampiasaina ary tena tsara ny vokany
arahabaina ary mandroso
Manoro hevitra anao ho an'ny namako aho, arahaba avy amin'i La Paz, Baja California Sur Mexico
Valiny amin'ny CASIMIRO GARDEA OROZCO
Thierry dia hoy izy:
Mba hametrahana ny sonianao amin'ny soratra manjelanjelatra na sary sns. Mamorona fotsiny izay tianao apetraka, ao amin'ny hotmail ohatra, mandeha any amin'ny safidinao mailaka izay ilazany hoe "options more" ary amin'ny lohateny hoe "personalize your mail" dia misy sonia manokana an'ny mailaka. tsindrioo io ary miseho ny fikandrana toa ny hanoratra mailaka vaovao ianao, ao anaty boaty lisitra eo ankavanana milaza soratra manankarena, tsindrio ary safidio ny fanovana amin'ny HTML. Hisy lohateny hiseho ao amin'ilay kaody aorian'izay dia apetaho ny kaody html izay manome anao ny lahatsoratrao noforonina tamin'ny glitterfly na ny sary na izay nataonao ary apetaho, rehefa avy nopetahana ianao, mba tsy hiseho ilay angano [Glitterfy.com - * Teny mamirapiratra *] aforeto ao anaty kaody fotsiny izay voafono ao anaty fononteny toradroa ao anatin'izany ny fononteny. ary voila ianao mitahiry ireo fanovana. Mba hitsapana dia mandefa mailaka fitsapana ho anao ianao ary ao no hahitanao ny valin'ny sonia nataonao. Miarahaba anao manantena aho fa mahasoa anao io.
Valio amin'i THIERRY
IZAY MAHAY FANAMPIANA PROGRAMA CHIC HANORATRA NY DONDRIKA PHOTOS PHOTO MONTAGES GLITER sns. …… ..
PÒRFA MBOLA IZAHAY IZAO NO JANGA DAHOLO ARY TSY HITADY
Miala aho dia hoy izy:
ahoana no ahafahako misintona azy
Mamaly an'i alejo
alixxxx dia hoy izy:
Ary ahoana no fomba hitahirizako ireo sary ao amin'ny pc?
Mamaly an'i alixxxx
TENA TSARA TSARA NY SARY ZAC
Valiny amin'i CARLA
Jocelhyn dia hoy izy:
Ity pejy ity io no ambony indrindra
Valiny tamin'i Jocelhyn
BAYA PROGRAM Q TSY AZO sintonina
Valiny amin'i TANIA
lia-sama dia hoy izy:
tsara !! misaotra..Hampiasaiko aho ... <3
Mamaly an'i lia-sama
dary dia hoy izy:
Onja inona, ry namako, manao ahoana ny fialan-tsasatra eto? Asshole aho isaky ny tolakandro, zara raha mihetsika ny rantsan-tànako roa lol.
Ary nametraka mozika avy amin'ny BIG TIME RUSH aho
Iza no tia BIG TIME RUSH mba valio aho ah ary apetraho koa aho izay mitady fotoana maika !!!!!
Ami tiako Logan ary efa fantatro daholo ny momba ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany tamin'ny 14 SEPTAMBRA !!!!!!!!!
Izy no emororan'ny fiainako
Valio i dary
Addy dia hoy izy:
Tena tsara tarehy ity pejy ity, tena amporisihiko ho anao ry bexoz
Mamaly an'i addy
misaotra an'i thierry noho ny torohevitra ho ezahiko. dary tiako koa ny logan indrindra satria tsotra be ny zanako vavy miresaka betsaka aminy sy amin'ny hafa, fa ilay tena saro-piaro tsy te handalo ahy fa manenjika ny arahaba daholo aho.
Mamaly an'i lucy
Volana Michael dia hoy izy:
Toa tsara izany fa ahoana no fomba fampidinana azy
Valio i Miguel luna
Gabriella dia hoy izy:
Mamaly an'i gabriella
salama tiako io !!! haha xD xD Nateraka aho!
Tiako ny maka sary eto
Samy galiindo dia hoy izy:
tena mahafinaritra ahy ity ……
Valiny tamin'i Samy Galiindo
Mahafinaritra tokoa ity :-) :-) Mahaliana ahy izy ireo fa mahatalanjona ry zareo veloma ...
Prisciliita Akd dia hoy izy:
Ahoana no fomba fakako sary
Valiny tamin'i Prisciliita Akd
La_larita dia hoy izy:
& Manjaitra ny fomba fampiasana azy aho: _ Iriko ny hanaovan'izy ireo azy dia ny facebook toa izao miaraka amina litera mahafinaritra be
Valio i La_larita
M ??? ? dia hoy izy:
Misaotra tiako izany.
Mamaly an'i M ??? ?
Margarita González Síllas dia hoy izy:
Ahoana no fomba fampidiko sary ???
Valiny tamin'i Margarita González Síllas
Ity no sary famantarana vaovao an'ny Firefox sy ny fianakaviany